Momba anay - Wuxi Lanling Railway Equipment Co., Ltd.
Wuxi Lanling Railway Equipment Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny Jolay 1989, ary manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fitaovana lalamby. Ny vokatray dia misy sokajy isan-karazany, ao anatin'izany ny clip spring karazana A, type B, type I, type II, type III, type D1, type WJ-2 subway spring clip, spring clip type E series, type PR series, SKL series, ary sns. Izahay koa dia mamokatra karazan-takelaka afrika fandrefesana lalamby, fantsika vy, voanjo, mpanasa fisaka, mpanasa lohataona, pad vy, pady vita amin'ny fingotra ampiasaina amin'ny karazan-dàlan'ny torimaso miendrika lalamby sy ny volavolan-taham-pahavitrihana, takelaka plastika ary vokatra nilona. Ny adiresin'i Lanling dia ny 168 First Nanfeng Road, Meicun Town, Distrikan'i Xinwu, Wuxi City, faritanin'i Jiangsu, Sina. Ny fitaterana mankany sy avy any Lanling dia tena mety. Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Wuxi dia 10 kilometatra atsimon'ny Lanling, ary ny lalana Huning sy ny làlan'ny fanjakana 312 dia samy minitra vitsy monja.
Ny fahafaha-mamokatra lanling isan-taona an'ny fampitaovana lalamby dia singa 10 tapitrisa eo ho eo. Lanling dia manana tsipika famokarana 3 ho an'ny sarimihetsika lalamby, 2 ny tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka, tsipika famokarana pad 2 vy, tsipika famokarana hoho faran'izay mandroso 1, ary tsipika fanangonana 2 ho an'ny fitsaboana sy loko hosodoko amin'ny lohataona. Ny fitaovana lehibe ampiasain'i Lanling dia misy karazana mixeur 3 hamokarana pads vita amin'ny fingotra, 3 milina fanaovana mixe, 3 tonta 400 taonina, 5 setina 300-taonina, 10 setin'ny milina fanaovana volo volo miisa 100 taonina, ary takelaka plastika 1 tsipika famokarana.
Politikan'ny kalitaon'ny Lanling dia "Fanamafisana ny kalitaon'ny fanamafisana hatrany; fampiharana ny famaritana ny fizotrany; fanatsarana ny fahaiza-miantoka ny kalitao; fanatanterahana ny fenitra takiana amin'ny vokatra" Ny tanjon'ny kalitaon'ny Lanling dia "Mba hiantohana ny taham-pahaizan'ny vokatra ho 100% rehefa miala amin'ny ozinina, ary ny vokatra tsy mahay tsy avela hiala". Ny fanamafisan'i Lanling ny kalitaony dia ny "Manome vokatra mendrika ary manome serivisy miahy". Ny kalitaon'ny vokatra no tadiavintsika mandrakizay; Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ny ezaka maharitra ataonay, ary tapa-kevitra izahay ny handray anjara amin'ny fanamboarana lalamby sy lalamby an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny vokatra tena mahay, ny vidiny tena ilaina ary ny serivisy tena tsara. Wuxi Lanling Railway Equipment Co., Ltd. dia mandray tsara ireo mpanjifa anatiny sy vahiny hitsidika sy hanome torolàlana matihanina ho anay!
Gauge Lock Clip, rafitra fifamatorana lalamby, clip elastika, e2055, mpamatsy lalamby, clip amin'ny lalamby,